Izinhlelo ze-Mac: izinhlelo zokusebenza nemidlalo engcono kakhulu | Ngivela kwaMac (Ikhasi 3)
IPath of Exile game, etholakala kuMac kusukela ngoSepthemba 11
Isihloko esithi Path of Exile sizofika ku-Apple ecosystem ka-Septhemba 11, inqobo nje uma i-coronavirus ingasivimbeli.
Ukubukwa kuqala kwe-Safari Technology manje sekutholakala kunguqulo 111
Isiphequluli seSafari sokuhlola, lapho i-Apple ihlola khona imisebenzi engahle ifinyelele noma ingafinyeleli kunguqulo etholakalayo yeSafari ...
Ukufana Ukufinyelela 6: Amandla wokufinyelela okukude ngama-Mac angafika kwamahlanu
Uhlobo olusha lwe-Parallels Access for Mac, luvumela uhlobo olusha losizo lomuntu siqu ukude nama-Mac afika kwangu-5 ngasikhathi sinye.
Umphathi womsebenzi we- "Ngenxa" we-macOS uthola isibuyekezo esikhulu
Umphathi womsebenzi we- "Ngenxa" we-macOS uthola isibuyekezo esikhulu. Isibonisi esisha nemisebenzi emisha ukuyenza isebenze ngokwengeziwe.
I-Spotify ye-Mac manje isingathumela umculo wakho ngqo ku-Chromecast
I-Spotify ye-Mac manje isingasakaza umculo wakho ku-Chromecast. Manje usungathumela umculo wakho ngqo kusuka ku-Mac yakho uye ku-Chromecast ngaphandle kokudlula ku-iPhone.
I-Telegram ivuselelwa ikuvumela ukuthi ungeze izithombe zephrofayili noma amavidiyo nokuningi
Uhlobo olusha lweTelegram luhambisana nabasebenzisi be-iOS nabakwaMacOS. Kule nguqulo kunezelwa izinguquko ezibalulekile eziyi-6.3
Yazi yonke imininingwane yesithombe nge-Photo Infomation Viewer
Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, kuyashesha kakhulu futhi kulula ukwazi yonke imininingwane yezithombe kulabhulali yethu, idatha esisinikezwa uhlelo lokusebenza lwezithombe
Ngenxa yohlelo lokusebenza lweDesktop Ghost Pro, singazifihla ngokushesha zonke izithonjana kudeskithophu yethu ngokushesha futhi kalula
Khipha ozimele kusuka kumafayela we-GIF ngokushesha futhi kalula ngalolu hlelo lokusebenza
Ukukhipha ozimele abayingxenye yefayela le-GIF kulula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza oluhlukile lwe-Gif olutholakalela i-macOS.
Nciphisa umsindo ezithombeni zakho nge-Super Denoising
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Super Denoising, singanciphisa umsindo kusuka ezithombeni ngemizuzwana nje ngendlela elula.
Bona ngeso lengqondo ukuthi uyisebenzisa kanjani i-hard drive yakho kugrafu
Ukwazi ukuthi sisisebenzisa kanjani isikhala kwi-hard disk yethu kusivumela ukuthi sazi futhi sikhulule ngokushesha isikhala esingadingekile ukuthi sihlala kuso.
Fiphaza ingemuva lezithombe zakho nge-Photo Blur
Ukufiphaza ingemuva lezithombe zethu ku-Mac kuyinqubo esheshayo nelula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Photo Blur.
Landa amavidiyo avela ku-YouTube, Facebook, Vimeo kanye nanoma iyiphi enye ipulatifomu ene-Downie
Uma ufuna uhlelo lokulanda amavidiyo we-YouTube, kufanele uzame i-Downie, uhlelo olusheshayo nolusebenziseka kalula.
Nweba noma nciphisa isikhala sokuhlukanisa iBoot Camp ngeCamptune
Ukuguqula isikhala lapho ukwahlukanisa kwethu iBoot Camp kuhlala ku-Mac yethu kushesha kakhulu futhi kulula ngeCampTune, ngaphandle kokufaka kabusha iWindows.
Vimbela iMac yakho ekulaleni nge Ungalali
Ngenxa yohlelo lokusebenza lokuthi Ungalali, iMac yethu ayisoze yalala lapho uhlelo lokusebenza luvulekile noma inqobo nje uma sisungule
Beka isikhathi samazwe owafunayo kubha yemenyu ne-Times
Ngohlelo lwe-Times, kulula kakhulu ukwazi ngokushesha futhi kalula ukusetshenziswa kwehora kwamanye amazwe ukuze ungashayi ngemuva kwamahora.
Ingqikithi Yempi: UWarhammer II ufika ngokusemthethweni kwi-Mac App Store
Umdlalo oyinganekwane Ingqikithi Yempi: WARHAMMER II ufika ngokusemthethweni esitolo sohlelo lokusebenza lweMac, iMac App Store
Impilo i-Strange 2 iphinde yehliswa yaba intengo uhhafu
Isaphulelo esingu-50% somdlalo we-macOS, Impilo iyinqaba 2. Lo mdlalo uzothengiswa isikhathi esilinganiselwe amahora ambalwa
I-Safari Technology 110 isiyatholakala ukulanda
Uhlobo lwe-110 lweSafari Technology manje seluyatholakala ukulanda kusuka kumaseva we-Apple.
IPixelmator Pro ifinyelela ku-1.7 ngezindaba ezithokozisayo
Ukuvuselelwa kwakamuva kwePixelmator Pro kusinikeza izindlela ezintsha zokusebenza nemibhalo ngokuzivumelanisa namafomu asungulwe ngaphambilini.
Le phrojekthi ye-SwiftUI isibonisa ukuthi uhlelo lokusebenza lwezeMpilo luzobukeka kanjani kwi-Mac yakho
Le phrojekthi ye-SwiftUI isibonisa ukuthi uhlelo lokusebenza lwezeMpilo luzobukeka kanjani kwi-Mac yakho. Uhlelo lokusebenza okungafanele lube kwi-iOS kuphela, kepha futhi naku-iPadOS naku-MacOS.
Hlala unolwazi ngezindaba ze-Google ku-Mac yakho ngalolu hlelo lokusebenza lwamahhala isikhathi esilinganiselwe
Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, singafinyelela izindaba ezisithakazelisa kakhulu kusuka ku-Google News kusuka kubha yemenyu ephezulu ye-Mac yethu.
Usuku lweTende, iGrim Fandango ne-Full Throttle mahhala isikhashana ku-Mac App Store
Uma uhlale uthande ukuzidela okucacile, akufanele uphuthelwe lokhu kunikezwa okumnandi kwezihloko ezi-4 esingazilanda mahhala.
Ukudlala amavidiyo we-YouTube ne-Vimeo ku-Amakhasi naku-Izinombolo manje kungenzeka ngesibuyekezo sakamuva
Ukuvuselelwa kwakamuva kwamakhasi nezinombolo kusivumela ukuthi sidlale ividiyo ye-YouTube neVimeo ngqo embhalweni.
Ungayiphatha kanjani inkampani yethu ngendlela elula ngaphandle kokuya ngabesithathu
Lawula inkampani ngaphandle kokuya ngezeluleko kunqubo elula kakhulu uma sinamathuluzi afanele.
I-Excel ye-Mac isivele isivumela ukungenisa amatafula kusuka ezithombeni
Umsebenzi omusha owengezwe yi-Excel ye-Mac, usivumela ukuthi sakhe amatafula kusuka ezithombeni ezikopishelwe kubhodi yokunameka
I-Google Chrome izosivumela ukuthi sithole amahora ama-2 wempilo yebhethri ngokunciphisa ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza
Linganisa amabanga nezindawo kusuka ku-Mac yakho ngamamephu endawo nendawo
Ngohlelo lwemephu nebanga lendawo singakwazi ukukala amabanga futhi sibale izindawo ngokushesha okukhulu futhi kalula.
IBioshock Ibuyekezwe ngesaphulelo esingu-75%
Isaphulelo esingu-75% se-Classic Bioshock Remastered esitholakala esitolo sonjiniyela i-Feral Interactive
Hlela iMac yakho ukuvala shaqa, ukuqala kabusha noma ukulala ngokulala
Ngenxa yohlelo lokusebenza lokulala, singakwazi ukuvala ukuvalwa kwemishini yethu ngokushesha futhi kalula, uhlelo lokusebenza luphoqa ukuvalwa kwezinhlelo zokusebenza ezivulekile
Izinto Eziyinqaba: 3 umdlalo wamahhala isikhathi esilinganiselwe ku-Epic Games Store
Esihlokweni esandulele, ngikwazise ngesihloko esingasithola ngesaphulelo esithandekayo ku ...
I-GRID Autosport enikezwayo ngesikhathi esilinganiselwe (ama-euro angu-5,49)
Uma uthanda umjaho wezimoto zemidlalo, mhlawumbe unentshisekelo yokwazi ukuthi i-GRID Autosport iyatholakala ngokuthengiswa isikhathi esilinganiselwe
I-Xcode 12 iletha ukwakheka okusha namathebhu amadokhumenti amasha
I-Xcode 12 iletha ukwakheka okusha namathebhu amadokhumenti amasha. Ukubukeka okusha ngokuhambisana ne-MacOS Big Sur namathebhu amasha.
ISafari izohambisana nezandiso zewebhu ezivela kwezinye iziphequluli
Nge-MacOS Big Sur, i-Apple ifuna ukunikeza ukugqama okukhulu kuzandiso ngaphakathi kweSafari futhi ibavumele ukuthi baguqulwe kalula
I-Opera ye-macOS ingeza ukufinyelela ku-Twitter kusuka kubha eseceleni
Isiphequluli se-Opera se-macOS sisanda kuvuselelwa kunguqulo engu-69, kufaka phakathi ukuthuthuka okuthile nokuhlanganiswa kwayo nenethiwekhi yokuxhumana nabantu i-Twitter
I-EzyCal, ikhalenda yebha yemenyu ephezulu yesikhathi esilinganiselwe yamahhala
I-EzyCal uhlelo lokusebenza lwekhalenda olulula olutholakala kubha yemenyu engenhla futhi isivumela ukuthi sengeze imicimbi emisha futhi siyisuse ekhalendeni lomdabu
Ingqikithi Yempi: Ukuqoqwa kweShogun 2 nokuwa kweSamurai ngama-50%
Izihloko ezimbili ochungechungeni lweMpi Iyonke ezesikhathi esilinganiselwe kuma-50% wentengo yazo ejwayelekile esitolo seFeral Interactive
Funda ukuthayipha ku-Mac yakho nge-KeyKey
Ukufunda ukuthayipha ukuthuthukisa umkhiqizo wethu kuyinqubo esheshayo futhi elula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lweKeyKey
I-4Ktube, isandiso esihle seSafari esikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo we-4K
Sebenzisa lesi sandiso esibizwa nge-4Ktube ukuze ukwazi ukudlala kalula ukufinyelela kokuqukethwe okungu-4K kusuka ku-Safari ku-Mac yakho
ITwitch Studio isiyatholakala nge-Mac ku-beta
Uhlelo lokusebenza lweTwitch Studio lokusakaza kusuka ku-Mac manje seluyatholakala, noma okwamanje ku-beta yawo wonke umuntu.
Hlala ugcina iMac yakho yenziwe nge-CleanMyMac X
Izicelo ezinhle kakhulu ezitholakalayo manje ze-macOS ezisivumela ukuthi sithuthukise ukusebenza kwekhompyutha yethu yi-CleanMyMac X
Bheka lezi zinketho uma udinga ukudlulisa idatha kusuka ku-Android iye kwi-MacOS
Akubona bonke abasebenzisi be-Mac abane-iPhone. Uma ungomunye wabo futhi ufuna ukudlulisa idatha kusuka ku-Android iye ku-Mac, bheka lezi zinhlelo zokusebenza ezintathu.
Faka umphumela we-retro ezithombeni zakho nge-Camera Retro
I-Camera Retro uhlelo lwe-macOS esingakwazi ngalo ukuguga izithombe zethu kalula futhi ngokushesha ngokuchofoza okumbalwa.
Inqubo qapha, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Ngenxa yohlelo lwe-Process Monitor, singabheka ngokushesha ukuthi iziphi izinsiza noma izinsizakusebenza imishini yethu esebenzisa ukusebenza kwayo.
Ukungcola 4 kutholakala ngesaphulelo esingu-40%
Thola umdlalo weRally Dirt 4 we-macOS ngesaphulelo esingu-40% ngentengo yayo esemthethweni. Isipho sangempela sabathandi bale midlalo
I-Apple yenza itholakale kunoma yimuphi umsebenzisi we-Mac, uhlelo lwamahhala lwe-iBooks Author, isicelo esingasisebenzisa…
IMactracker ivuselelwa futhi ingeza imikhiqizo emisha
Enguqulweni entsha yeMactracker kunezelwa izindaba zakamuva maqondana nemishini ye-Apple nezinhlobo zesoftware
Ungaphuthelwa yimiphi imibono ngenxa yeCorkulous for Mac
Uma ufuna ukuhlela imibono yakho, ihlobane futhi itholakale ku-Mac yakho, iCorkulous kungaba uhlelo obulifuna.
Phatha ikhalenda lakho kusuka kubha yemenyu nge-popCalendar
Ukuphatha ikhalenda kwi-Mac yethu kusuka kubha yemenyu ephezulu kuyinkqubo elula kakhulu ngenxa yohlelo lwe-popCalendar
I-Oceanhorn 2 Gold Edition Manje Isitholakala ku-Apple Arcade
Manje itholakalela ukulanda nokudlalwa kwegeyimu i-Oceanhorn 2, uhlelo lwegolide olunemishini emisha, ukuphela okusha nemidwebo engcono ku-Apple Arcade
Guqula ama-DVD akho abe yi-MP4 ngemizuzu emihlanu nje nge-MacX DVD Ripper Pro (mahhala)
Ingabe ufuna ukuguqula DVD MP4 MPXNUMX on Mac? Thola ukuthi ungakwenza kanjani kalula futhi ngokushesha okukhulu ngaleli thuluzi lokwenza izipele zama-DVD akho.
Phatha ama-PDF akho ngaphandle kwezinkinga nomphathi we-PDF
Imenenja ye-PDF isivumela ukuthi sengeze futhi / noma sisuse amakhasi efayeleni le-PDF, silivikele ngephasiwedi, silicindezele, sifake izithombe
I-2 engaphenduliwe ye-Mac futhi ungalokothi ushiye iMessage ingaphenduliwe
Ungalahlekelwa yi-iMessage evela kwi-Mac yakho ngalolu hlelo lokusebenza olusixwayisa kalula ngemilayezo engafundiwe noma engaphenduliwe
Izinto 3 zivuselelwa futhi zengeza imisebenzi emisha ye-Mac ne-Apple Watch
Ukuvuselelwa okusha kweZinto 3, 3.12.4, kuletha izindaba ezithokozisayo zama-Macs ethu, kepha ikakhulukazi i-Apple Watch.
Phatha futhi ufihle izinhlelo zokusebenza kusuka kubha yemenyu neBartender 3
Ngenxa yohlelo lweBartender 3 esikwazi ukuphatha ngaso sonke isikhathi ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza eziboniswa kubha yemenyu ephezulu ngaphezu kweminye imisebenzi
Thola umhlaba wezilwane zasendle nge-3D Earth
Ngohlelo lokusebenza lwe-3D Earth, abancane endlini bangazi izinhlobo ezahlukahlukene zezilwane nezitshalo ezivela emhlabeni wonke.
Ungalivula kanjani ikhasi lewebhu le-Safari kwesinye isiphequluli
Uma usebenzisa iSafari njalo kepha ungakwazi ukufinyelela kahle kuwo wonke amakhasi wewebhu owabukayo, sizokukhombisa ukuthi ungayixazulula kanjani le nkinga.
Ingqikithi Yempi: I-WARHAMMER II - I-Warden ne-Paunch DLC manje isiyatholakala kwi-macOS
I-DLC entsha isiyatholakala ngomdlalo odumile Ingqikithi Yempi: WARHAMMER II. Kulokhu, i-The Shadow ne-Paunch DLC
Dala amabhakhodi ngokushesha futhi kalula nge-Barcode Maker
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Barcode Maker, singakha ama-barcode ngokushesha futhi kalula, ahambisana nawo wonke amafomethi emakethe.
I-Zoom ihlela ukuphepha kakhulu kunguqulo yayo ekhokhelwayo
I-Zoom ihlela ukuphepha kakhulu kunguqulo yayo ekhokhelwayo. Uthole isiqalo esikhethekile ekubetheleni imiyalezo namafayela ukusisebenzisa ku-Zoom.
Manje usungasebenzisa i-Canon EOS yakho njengekhamera yewebhu ku-Mac yakho
Manje usungasebenzisa i-Canon EOS yakho njengekhamera yewebhu kwi-Mac yakho. Manje usungashintsha ikhamela ye-FaceTime yeMac yakho neCanon EOS noma iPowershot yakho ukwenza umhlangano wevidiyo.
Ukungcola kwe-Bike Motocross Stunts, ngaphansi kwama-euro ama-3 ku-Steam
Thenga umdlalo we-Dirt Bike Motocross Stunts we-Mac futhi ube nesikhathi esihle sokwenza ukweqa nokuhamba ngesithuthuthu sakho.
I-HEIC Converter -Aiseesoft ye-Mac mahhala okwamanje
Isiguquli se-HEIC sikuvumela ukuthi usuke kule fomethi uye ku-JPG noma i-PNG ngendlela elula evela kwi-Mac futhi manje futhi mahhala ku-App Store
ILogitech yethula ikhibhodi yayo entsha ye-G915 Tenkeyless mechanical
Ikhibhodi yemishini entsha yeLogitech G915 TKL isanda kwethulwa futhi inikezela abasebenzisi abanolwazi oluningi ukuthuthuka okuningi kunenguqulo yangaphambilini
Hlela izingqungquthela zakho zamavidiyo ku-Mac nge-EventEntry: Google Meet & Zoom
I-EventEntry uhlelo lokusebenza oluzosivumela ukuthi sihlele izexwayiso zokujoyina ngokukhululeka, izingqungquthela zamavidiyo ngeGoogle Meet noma i-Zoom
Yazi isikhathi sanoma yiliphi izwe kusuka kubha yemenyu nge-FlagTimes
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-FlagTimes, singakwazi masishane izindawo zesikhathi sanoma yiliphi izwe kusuka kubha yemenyu ephezulu.
Yazi ngaso sonke isikhathi ukushisa kwezingxenye zakho ze-Mac nge-Temperature Gauge
Ukwazi izinga lokushisa kwezingxenye ze-Mac yethu kungasivumela ukuthi sigweme ukuthi ezinye zezingxenye zayo zithola ukulimala okungenakulungiswa.
Sisebenzise kahle isikhathi sakho phambi kweMac nge-TimeTrack
Manje njengoba sichitha isikhathi esiningi phambi kwama-Mac ethu, ungahle udinge umphathi wesikhathi ukwazi ukuthi usisabalalisa kanjani. I-TimeTrack izokusiza.
Dala ngokushesha ama-mosaics wesithombe ngeTurboMosaic
Uma ufuna ukudala ama-mosaics ngezithombe zakho ozithandayo, ngenxa yohlelo lweTurboMosiac lwe-macOS ungakwenza ngokushesha futhi kalula.
ITowers ye-Everland isiyatholakala nge-Mac ngaphakathi kwe-Apple Arcade
Isihloko esisha sijoyina i-Apple Arcade. Akukho okunye futhi akukho okungaphansi komdlalo ohlanganisa ndawonye ...
IShadow of the Tomb Raider - I-Definitive Edition, etholakala kuFeral
I-Shadow yomdlalo weTomb Raider - I-Definitive Edition isiyatholakala kubasebenzisi beMacOS neLinux, ungabe usalinda futhi uyijabulele
Uma ukhathele amaphephadonga ahleliwe, kufanele uzame i-Backgrounds
Uhlelo lweBlackgrounds lusivumela ukuthi senze ngezifiso ngokuphelele isithombe (noma ividiyo) esiboniswa kwideskithophu yekhompyutha yethu.
Ukuvuselelwa Kohlelo Lokusebenza Kwesikole ku-Mac
I-Apple ilungiselela ukubuyela esikoleni okokuqala online ngokubuyekeza esinye sezicelo zayo zesikole ngokwenza kahle kwi-Mac: Umsebenzi wesikole
Nweba inani lamakhona asebenzayo ku-macOS ngesiqalisi se-Ambi
I-Ambi Launcher i-twist enezinketho eziningi ezengeziwe emakhoneni asebenzayo i-MacOS esinikeza yona ngokwendabuko.
Jabulela oshaka endaweni yabo yemvelo kwideskithophu yakho ye-Mac
Ngohlelo lwe-Sharks 3D, olutholakala kwi-Mac App Store, singagcwalisa ideskithophu yethu nezikrini zesikrini ngoshaka.
Dala ama-collage esithombe anoma imuphi umfanekiso nge-FigrCollage 2
Ukudala izibalo ngezithombe zethu kuyinkqubo elula kakhulu futhi ehlaba umxhwele esingayenza ngenxa yohlelo lweFigrCollage 2
Ukungcola 4 kwehliselwe iMac kwaFeral Interactive
Umdlalo wokungcola 4 ungatholakala kuwebhusayithi yeFeral Interactive ngentengo ephansi yama-euro angama-21
Enye inguqulo eyodwa yohlelo lokusebenza lwe-Mactracker ye-Mac iyatholakala. Lesi sibuyekezo sengeza ukulungiswa okuthile namamodeli we-Apple we-vintage
I-Ubisoft imangalela i-Apple ngomdlalo othi "Area F2"
I-Ubisoft imangalele i-Apple ngokwephulwa kwe-copyright futhi ivumela umdlalo we-Area F2 ukuthi ulandwe esitolo sayo.
Dlulisa idatha phakathi kwe-Mac yakho ne-iPhone ngokushesha futhi kalula nge-MobiMover Pro
Ukudlulisa idatha kusuka ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch iye kwi-Mac, noma okuphambene nalokho, inqubo elula kakhulu futhi esheshayo ngenxa yohlelo lwe-MobiMober
Isiphazamisi ku-Edison Mail "siwela" ama-akhawunti we-imeyili phakathi kwabasebenzisi
Isiphazamisi ku-Edison Mail "siwela" ama-akhawunti we-imeyili phakathi kwabasebenzisi. Iphutha elibi ku-Edison Mail linikeza ukufinyelela kuma-akhawunti wabanye abasebenzisi.
Yenza usesho oluphelele ku-Mac yakho ngenxa ye-Instantli
I-Instantli ingenye yalezi zinhlelo ezingaziwa kakhulu kepha uma unenjabulo yokuzizama, zingenye zalezo ozihlalela iMac yakho
I-Strongbox Password Safe for Mac ikusiza ukuthi ugcine amaphasiwedi wakho ephephile
I-Strongbox Password Safe ingelinye lalezo zinhlelo zokusebenza zokugcina amaphasiwedi akho endaweni ephephile futhi akudingeki uwakhumbule
Umdlalo wecebo Aegis Abavikeli, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Umdlalo we-Aegis Defenders kuhlobo lwayo lwe-Mac uyatholakala ukulanda mahhala nge-Humble Bundle.
Ukubukwa Kwe-Apple Ukukhishwa Kokuqala kwe-Technology 106
I-Apple ikhiphe ukuthi yini engu-106 ye-Safari Technology Preview. Isiphequluli se-internship esenziwe i-Apple eminyakeni emine eyedlule
Buyekeza i-Adobe Acrobat Reader ukugwema amaphutha ezokuphepha
Buyekeza i-Adobe Acrobat Reader ukugwema amaphutha ezokuphepha. Uma uyifakile, uvezwa kothile onokufinyelela ku-Mac yakho.
Yazi izigaba ezahlukahlukene zenyanga ngale khalenda yenyanga
Ngenxa yesicelo seDeluxe Luna HD, singazazi izifundazwe zenyanga uma sinentshisekelo engadini nasekufundweni kwezinkanyezi.
I-Unreal 5 izotholakalela ama-macOS ngo-2021
I-Epic Games imemezele ukuthi injini entsha yevidiyo ye-Unreal 5 izotholakala ngonyaka ozayo ethembisa ikhwalithi ehlukile
Ukulawulwa kwe-SteelSeries Nimbus + manje sekusemthethweni
Amahemuhemu agcwalisekile futhi i-SteelSeries manje ineNimbus + entsha etholakalayo Lokhu kungukulawula ngokuthuthuka okuthile okuthokozisayo
I-adventures engcono kakhulu ye-Mac
I-graphic adventures ibinomzuzu wegolide ngama-90s, kuhlobo oluye lwashiywa kuze kube namuhla kepha esisathola kulo izihloko ezinhle
Ukuvuselelwa okusha okukhulu kweLogic Pro ye-Mac
I-Apple yethule isibuyekezo esisha sohlelo lokuhlela umculo lweLogic Pro.Ukusebenza okusha futhi abanye asebemnkantshubomvu bavuselelwe ngokuphelele.
Ungalifaka kanjani ibhukumaka kufolda yekheli ku-Safari
Uma singafuni ukuthi amabhukumaka ethu e-Safari abe yiWild West, kufanele sigcine amabhukumaka amasha kumafolda awo ahambisanayo
Nge-Meeter hlela izinkomfa zakho zevidiyo ku-Mac yakho
Nge-Meeter, hlela izinkomfa zakho zevidiyo ku-Mac yakho. Thatha idatha yakho yekhalenda bese uqalisa inkomfa yevidiyo ngohlelo lokusebenza olisebenzisa njalo.
Gcina iMac yakho ingalali neNoSleep, mahhala isikhathi esilinganiselwe
I-NoSleep ingenye yezinhlelo zokusebenza ezivimbela iMac yethu ukuthi ingalali isikhathi esasungulwa yithi ngaphambilini
Guqula ama-Podcast akho abe ngamavidiyo ku-Mac yakho nge-FusionCast
Uma wake wacabanga ukuthi ama-Podcast akho azobukeka angcono kuvidiyo, ungaphuthelwa yilolu hlelo lokusebenza olusha olubizwa ngeFusionCast
Uhlelo lokusebenza oludumile lwe-Edison manje seluyatholakala nge-Mac
Uhlelo oludumile lokuphatha i-imeyili ku-IOS, i-Edison Mail, manje seluyatholakala ukulanda ku-Mac App Store.
IMactracker ithola esinye isibuyekezo ezinsukwini ezimbalwa
Uhlelo lokusebenza lweMactracker luthola inguqulo entsha ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuvuselelwa kwayo okukhulu. Kulokhu balungisa izimbungulu bese bengeza i-Magic Keyboard
Gxilisa ukunaka kwakho ngeDeskCover, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Ngenxa yohlelo lokusebenza lweDeskCover, singagxila ekukhiqizeni kwethu kuzinhlelo zokusebenza hhayi ngemuva kwedeskithophu yethu
Izinqamuleli zekhibhodi zohlelo lokusebenza lwe-MacOS Podcast
Uma ungumsebenzisi ojwayelekile wama-podcast we-Apple futhi usujwayele ukusebenzisa izinqamuleli zekhibhodi, ungahle ube nentshisekelo yokwazi lezo esikukhombisa zona kule ndatshana
Ngohlelo lokusebenza lwe-SwitchResX sizoba nokulawula okuphelele ekuxazululeni i-monitor yakho
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-SwitchResX, singashintsha kalula futhi ngokushesha ukulungiswa kwedeskithophu bese siqhuba izinhlelo zokusebenza ezihambisana nokusetshenziswa kwayo.
Ungazibonisa kanjani izinsizakusebenza zekhasi lewebhu ngeSafari
Ukuze ufinyelele ikhodi yekhasi lewebhu le-Safari, kufanele siqale sisebenzise imenyu yonjiniyela
IMactracker ithola isibuyekezo ngamamodeli amasha we-MacBook nokuningi
Uhlobo olusha lohlelo lokusebenza lweMactracker lungeza yonke i-hardware entsha nesoftware yethulwe yi-Apple ezinyangeni ezedlule.
Shintsha ukulungiswa kwe-Mac yakho ngokushesha ngalolu hlelo lokusebenza lwamahhala isikhathi esilinganiselwe
Isebenzisa izinqumo ezingahambelani ne-Mac yethu inqubo elula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Screen Manager
I-CleanMyMac X iza ku-Mac App Store futhi izobungaza ukuthi sinamalayisense ama-5
Zingaki izinhlelo zokusebenza ezingaziqhayisa ngokuguqula iminyaka engu-12 ubudala? Yebo, i-CleanMyMac X ingenye yazo, uphawu olucacile lokuthi iyakwenza ...
Ingqikithi Yempi: IShogun 2 ikhululekile isikhathi esilinganiselwe
I-Steam isinika isikhathi esilinganiselwe isihloko seTotal War Shogun 2, isihloko esinentengo ejwayelekile yama-euro angu-29,99.
Izinqamuleli ezinhle kakhulu zekhibhodi ze-Microsoft Excel ze-macOS
Uma ufuna ukuqonda izinqamuleli zekhibhodi ku-Microsoft Excel, kule ndatshana sizokukhombisa isifinyezo sezinto ezinhle kakhulu neziwusizo kakhulu.
I-Telegram yokwethula amakholi wevidiyo evikelekile kulo nyaka
ITelegram izokwethula amakholi evidiyo eqembu aphephile kulo nyaka. Ukuqinisekisile kubhulogi lakhe, ukuqinisekisa ukuthi bangaba seqenjini futhi babethelwe.
I-Telegram ye-Mac ivuselelwa kunguqulo 6.1.1
I-Telegram ingeza inguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwe-Mac, kulokhu sifinyelele enguqulweni 6.1.1 lapho abasebenzisi abayizigidi ezingama-400 begubha khona.
I-Apple ikhipha i-Safari Technology Preview 105 yokulungisa iziphazamisi nokwenza ngcono ukusebenza
I-Apple yethula izimbungulu zokulungisa i-Safari Technology Preview 105 nokwenza ngcono ukusebenza. Uhlobo olusha lwalesi silingo se-Safari lutholakala kuwo wonke umuntu.
I-PDF Plus, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Baningi abantu abathole ithuba lokuqhubeka nokusebenza besuka ekhaya selokhu kwaqala ...
Ungaguquguqula kanjani amavidiyo amanye amafomethi nge-VLC
Ku-Mac App Store sinenani elikhulu lezicelo ezisivumela ukuthi sobabili sidlale amavidiyo ...
I-Opera ye-Mac ifaka nokufinyelela ku-Instagram kunguqulo yayo entsha
I-Opera ye-Mac ifaka nokufinyelela ku-Instagram kunguqulo yayo entsha. Isithonjana kubha eseceleni sikunikeza ukufinyelela kokuphakelayo kwakho, izindaba, kanye nemiyalezo eqondile.
Ungathenga iNativeConnect ye-Mac ingunaphakade
Uhlelo lokusebenza lwe-NativeConnect oluqondiswe kunjiniyela manje selungalandwa kusuka ku-Mac App Store ngokuthenga okukodwa, impilo yonke.
I-Path Finder, enye indlela emnandi yokuthola i-Finder kwi-Mac
Uma i-MacOS Finder ingakuqinisekisi, kungenzeka ukuthi unentshisekelo yokwazi uhlelo lokusebenza lwePath Finder, umhloli wefayela onokusebenza okuhlukahlukene okumnandi
I-Twitter ye-Mac ivuselelwa ukuze umugqa wethu wesikhathi uthole ama-tweets ngesikhathi sangempela
I-Twitter ivuselelwa ukunikeza abasebenzisi bayo umsebenzi wokuvuselela ngokuzenzakalela umugqa wesikhathi ngokushicilelwa okusha
Umdlalo we-Atom Run, mahhala isikhathi esilinganiselwe
I-Atom Run, umdlalo wasepulatifomu otholakala ku-Mac App Store, utholakalela ukulanda mahhala mahhala isikhashana.
I-Beyond Blue ne-A Fold Apart, imidlalo emibili emisha ye-Apple Arcade
Imidlalo emibili emisha isivele ikhona ku-Apple Arcade: Beyond Blue naku-A Fold Apart, bafika beqinile ukujabulisa abasebenzisi babo
Amasondo e-Aurelia, amahhala ku-Epic Games Store isikhathi esilinganiselwe
Umdlalo wamahhala iSitolo seMidlalo yama-Epic esenza sitholakale kuwo ngama Wheel of Aurelia, isihloko esilandisa isikhathi emlandweni wase-Italy
Dala umculo wakho ngeGarage Band ku-Mac yakho
Ungazenzela umculo wakho ngeGarage Band kanye nezitsha onazo eduze kwendlu yakho. Kumele nje uzivumele ukwelulekwa yi-Today at Apple videos
IBatman Arkham City GOTY ngentengo uhhafu wama-macOS
Ukuthengiswa okusha komdlalo weBatman Arkham City GOTY esitolo esisemthethweni seFeral Interactive. Thatha inzuzo yentengo yokwehlisa yalo mdlalo omakadebona
/ Uwavula kanjani futhi uguqule amafayela we-.djvu kuma-macOS
Uma udinga ukuvula kanye / noma ukuguqula amafayela ngefomethi ye-djvu, kule ndatshana sikukhombisa izinhlelo zokusebenza ezinhle zokukwenza.
Ithikithi Lokuhamba: Uhambo Lokuqala, umdlalo wesitimela wamahhala womndeni wonke
Ithikithi Lokuhamba: I-Fiest Journey yisihloko sabancane esingabalanda mahhala isikhathi esilinganiselwe.
Izinqamuleli zekhibhodi zeziphequluli ze-Chrome ne-Edge ku-Mac
Izinqamuleli zekhibhodi zeziphequluli ze-Chrome ne-Edge ku-Mac. Uhlu lusebenzela iziphequluli zombili njengoba zisuselwa kungxenyekazi efanayo ye-Chromium.
Finyelela amasevisi wakho wokugcina amafu ngqo kusuka ku-Finder
Ngenxa yohlelo lwe-ExpandDrive, singangeza wonke ama-akhawunti wensizakalo yesitoreji esiwasebenzisa njalo ku-Finder.
Uhlelo lokusebenza lweGoodNotes luba jikelele
Uhlelo lokusebenza lwe-GoodNote Notes olunye uhlelo olwamukele ukuthengwa kwendawo yonke kuyo yonke imvelo ye-Apple
Ibha Ayikho insiza yamahhala evimbela ukuthintwa ngengozi kusuka ku-Touch Bar
IBar None iyinsiza yamahhala evimbela ukuthintwa ngengozi kweTouch Bar. Ungayenza isebenze kuphela uma ucindezela ukhiye we-fn.
I-MonitorControl ikuvumela ukuthi ulungise ukukhanya kwezikrini zakho zesibili ze-Mac
Lapho sinabaqaphi abengeziwe ku-Mac yethu, i-ControlMonitor ikuvumela ukuthi ulungise ukugqama nomsindo walezo zikrini kusuka kukhibhodi
Khomba wonke amadivayisi axhunywe kunethiwekhi yakho nge-IP Scanner
Ukukhomba amadivayisi axhunywe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi inqubo elula kakhulu ngohlelo lokusebenza lwe-IP Scanner
Amaphuzu avelele: Isifundi se-PDF sabacwaningi ngokuthengwa kwendawo yonke
Amaphuzu avelele: Isifundi se-PDF sabacwaningi ngokuthengwa kwendawo yonke. Kugxilwe kubafundi nakubacwaningi abafuna ukubhala amanothi kuma-PDF.
Izinqamuleli zekhibhodi ze-Maps on Mac. Ikakhulukazi uma usebenzisa amamephu ku-MacBook yakho ngaphandle kwegundane, izinqamuleli zekhibhodi zizokusebenzela kahle.
Uwavula kanjani amafayela we-webp ku-Mac
Uma unesidingo sokuvula amafayela ngefomethi ye-webp ku-Mac yakho, kule ndatshana sizokukhombisa ukuthi uluphi uhlelo oludingayo.
Amathuluzi wobumfihlo wokusebenzela ekhaya
I-Telework ayihambelani nobumfihlo. Empeleni kufanele simgcine ephephe kakhulu kunakuqala njengoba sichitha amahora amaningi ekhaya
Isoftware yokurekhoda ye-Universal Audio's LUNA itholakala nge-Mac kuphela
Isoftware yokurekhoda ye-Universal Audio's LUNA itholakala nge-Mac kuphela. Kumahhala kubasebenzisi bamadivayisi we-Universal Audio ane-Thunderbolt.
Qamba kabusha amafayela akho ngokushesha futhi kalula nge-Renamer 6
Ukuqamba kabusha amafayela ngokushesha nangokusindayo, inketho yendabuko enikezwa yi-macOS, ishiya okuningi okungafunwa ngokuya ngokusebenza.
Amanye amazwe avimbela izikhulu zawo ekusebenziseni i-Zoom
Amanye amazwe avimbela izikhulu zawo ekusebenziseni i-Zoom. IJalimane neTaiwan manje bavimbela ukusetshenziswa kwe-Zoom ezingqungqutheleni zamavidiyo zikahulumeni.
Ama-Simulators we-Mac ne-iPad odokotela bezitimela abalwa ne-COVID-19. Basiza ukujwayelana nemishini yokuphefumula ngaphambi kokuyisebenzisa kubantu abagulayo.
Gada izinqubo zakho ze-Mac ngalolu hlelo lokusebenza
Uma ikhompyutha yethu isiqalile ukukhombisa ukusebenza okungalungile, ilenga noma ingaphenduli, into yokuqala okufanele siyenze ukukhomba inkinga ngohlelo lokusebenza lokuqapha ikhompyutha
I-Ani'Mots umdlalo we-crossword wabancane
I-Ani'Mots ngumdlalo we-crossword wabancane ukuba bazijabulise ngenkathi befunda benganakile.
Umdlalo weStardew Valley uyatholakala kubasebenzisi be-Mac
Umdlalo waseStardew Valley ngumdlalo ozosiyisa emazweni asizuze njengefa kumkhulu wethu ukulima insimu futhi sisebenze njengabalimi
Isicelo seSoulver for Mac sibuyekeziwe.
Isicelo seSoulver seMac sisanda kuvuselelwa futhi siba uhlelo olusheshayo, olusebenza kahle olunezici eziningi ezinamanzi amaningi
Umphathi webhola le-2020, uyatholakala kwi-Steam for Mac
Kubo bonke labo abathanda ibhola futhi abacabanga ukuthi bangaba neqembu labo, Umphathi weBhola 2020 ngumdlalo wakho weMac
Ungalanda kanjani iMicrosoft Edge esekwe kuChromium ye-macOS
Uma ufuna ukuzama iMicrosoft Edge Chromium entsha kwi-Mac yakho, into engiyincomayo mathupha, ngikukhombisa ukuthi ungayilanda kanjani.
Ithole ukuba sengozini enkulu kuFirefox
Kutholakale ubungozi obukhulu kuFirefox, ngakho-ke sekuvele kuthatha isikhathi ukubuyekeza inguqulo yakho yalesi siphequluli
Ungasifaka kanjani isithombe sangemuva ku-Google Chrome
Ukungeza isithombe sangemuva kuGoogle Chrome kungezinye zezizathu ezimbalwa zokuthi kungani lesi siphequluli sikufanele kuma-macOS.
ITelegram Lite ibuye ibuyekezwe ukwamukela amafolda
ITelegram Lite ibuye ibuyekezwe ukwenza amafolda, okuyindlela esezingeni eliphakeme yokuvuselelwa kwakamuva kwale nsizakalo yemiyalezo
Umdlalo we-Gone Home, otholakala ku-Epic Games Stre mahhala isikhathi esilinganiselwe
Isihloko se-Mac esinikezwe yona kuleli sonto i-Epic Games Store sithi Gone Home, umdlalo ohlukile ocacile lapho kungadingeki sixazulule amaphazili.
I-Zoom ivuselelwa i-Mac futhi isusa i-'Preflight '
Izinkinga ziyaqhubeka nokukhula kuZoom yize ezixazulula kancane kancane. Lokhu kuhlobene nenkinga yokufaka uhlelo lokusebenza ku-Mac
I-Zoom ilandela indlela efanayo ne-Facebook
Okuwukuphela kokunye ukusondeza ukuze wenze amakholi evidiyo asezingeni eliphakeme futhi nabahlanganyeli abaningi yi-Skype, ayikho enye.
I-Facebook Messenger yethula uhlelo lwe-macOS ngezingcingo zevidiyo
I-Facebook isanda kukhipha uhlelo lokusebenza lwemiyalezo lwe-macOS, esivumela ukuthi senze amakholi wevidiyo angenamkhawulo.
Amafolda afika kuTelegram ye-Mac
Uhlobo olusha lweTelegram ye-macOS lungeza inketho yokwengeza amafolda ukuhlela izingxoxo nezinye izinto eziningi ezintsha
Isiphequluli se-Chrome sisikhumbuza ukuthi singakhohlwa ngeFlash ngaphambi kokuphela kuka-2020
I-Google isikhumbuza nge-Chrome kusukela ekupheleni kuka-2020, singakhohlwa ngokukwazi ukuvula amakhasi ewebhu adalwe ku-Flash
I-Streamlabs OBS isiyatholakala nge-beta ye-macOS
Uhlelo oludumile lwe-Streamlabs OBS kuhlobo lwayo lwe-Mac seluyatholakala, yize okwamanje luku-beta.
IWork suite ye-Mac ivuselelwe enguqulweni engu-10.0
I-Apple ivuselele i-iWork suite equkethe amakhasi, izinombolo kanye ne-Keynote enguqulweni engu-10.0 ngezindaba ikakhulukazi ezimayelana ne-iCloud
Yini engalungile ngohlelo lwe-Zoom for Mac?
Kubonakala sengathi i-Zoom ayiqinisekisi ukuphepha kwamakhasimende ayo ngokubethela kokuphela kokuphela futhi lokhu kungaholela ekukhathazekeni kobumfihlo
Ukuthengwa kwendawo yonke sekuqala ukubonakala: «Ukuzivumelanisa nezimo» kungenye yazo
Ukuthengwa kwendawo yonke sekuqala ukubonakala: "Ukuzivumelanisa nezimo" kungenye yazo. Ngokuthenga okukodwa unenguqulo ye-iOS kanye ne-MacOS.
Faka imenyu yokufinyelela okusheshayo ngezenzo ozisebenzisa kakhulu kwi-Mac yakho nge-One switch
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-One switch, singenza kusebenze futhi sisebenzise ezinye izilungiselelo ze-MacOS ngokuchofoza okukodwa ngaphandle kokuzulazula kumamenyu eqembu lethu.
I-Pixelmator Pro ivuselelwa ngokuthuthuka okuningana okubalulekile
Sivele sinenguqulo entsha yohlelo lokusebenza lokuhlela lwePixelmator Pro olutholakalayo, kulokhu inguqulo engu-1.6 enezici ezintsha ekukhetheni umbala nokuningi
Kudakiwe! 2, umdlalo wokubambisana omnandi ongawujabulela nabancane
Uma ufuna umdlalo omnandi wokuchitha isikhathi nezingane zakho ngalezi zinsuku zokuhlukaniswa, Kuphuziwe! 2 kuyindlela enhle ongayicabangela.
I-beta yeDropbox ye-macOS manje ibukeka njenge-iCloud
Ku-beta yakamuva yeDropbox bangeze ukusebenza kokuvumelanisa okusha okwenza lolu hlelo lokusebenza labelane ngemisebenzi efana ne-ICloud
I-Apple inyusa isivivinyo samahhala sezicelo zayo ze- "Pro" ezinsukwini ezingama-90 ngenxa yokuboshwa
I-Apple inyusa isivivinyo samahhala sezicelo zayo ze- "Pro" ezinsukwini ezingama-90 ngenxa yokukhiya. Ziyi-Logic Pro X yomsindo nevidiyo ye-Final Cut Pro X.
Uma ufuna ukuthi amaphephadonga we-Apple TV abonakale ku-Mac yakho, ungakwenza ngokusebenzisa uhlelo lwamahhala. I-aerial ingukukhetha kwakho.
I-Affinity Photo for Mac ngama-50% izinyanga ezintathu
I-Affinity yeMac inqume ukwehlisa intengo yohlelo lwayo ngo-50%. Izinhlamvu zakho zesihlabathi ukunciphisa imiphumela ye-COVID-19
Imidlalo Yama-Mac Ema-14 Enza Ukuhlukaniswa Kakhulu Kutholakale
Hhayi kuphela i-Epic Games Store, iSteam neMac App Store abasebenzisi be ...
Uma uneMovistar + ungayibona kwi-Mac yakho ene-VLC
Uma uneMovistar + ungayibona kwi-Mac yakho ene-VLC. Lapho kungekho uhlelo lokusebenza. odabuka eMovistar, ungasebenzisa i-VLC ukubona ipulatifomu yayo, uma ngabe ubhalisile, kunjalo.
ITomb Raider, mahhala isikhathi esilinganiselwe ku-Steam
Kuze kube ngoMashi 24 olandelayo, singalanda umdlalo weTomb Raider mahhala ngeSteam
Indawo yokuhlangana mahhala izinsuku ezingama-90
Indawo yokuhlangana mahhala izinsuku ezingama-90. Ungazama yonke indawo ezinsukwini ezingama-90 ezizayo, futhi uma ikukholisa, manje ngesaphulelo esingu-50%.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokufaka esikhundleni seWunderlist
NgoMeyi 6, i-Wunderlist izoyeka ukusebenza, kodwa ngaphambi kwalolo suku, kumele ngabe imisebenzi yethu siyibeke kolunye uhlelo lokusebenza. Uma ufuna ezinye izindlela, sizokukhombisa izinketho ezinhle kakhulu
Ithebhu Yomsebenzi ye-Mac App Store ibaluleke kakhulu manje
Ithebhu Yomsebenzi esinayo ku-Mac App Store ingaba wusizo kulabo okufanele bathumele ngocingo kulezi zinsuku
I-FaceTime noma i-Skype yamakholi wevidiyo weqembu lakho avela ekhaya
Sinezinketho eziningi zokubona abangane nomndeni wethu ngekholi yevidiyo. Namuhla sigqamisa i-FaceTime ne-Skype
Imidlalo yama-Epic isinikeza imidlalo emi-3 mahhala ngokuphelele yeMac
Isitolo semidlalo yama-Epic sisinikeza imidlalo emi-3 yamahhala ehambelana neMac kuze kube ngumhlaka 19 Mashi.
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube kwi-Mac yakho
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube kwi-Mac yakho. Ngohlelo lokusebenza lwamahhala lwe-ViDL ongakwenza. Ikhwalithi yokulondoloza ingaphezu kokumukeleka.
URaskin uzoshintsha indlela osebenza ngayo kwi-Mac. Offer.
I-Raskin uhlelo lokusebenza olushintsha indlela osebenza ngayo kwi-Mac. Manje inguqulo yayo ye-Pro isendalini. Ithuba elihle.
Izinhlelo zokusebenza ezinhle zokusebenza ekhaya ne-Mac
Ngenkinga yezempilo eyenziwe yi-coronavirus, iziphathimandla zincoma ukusebenza ekhaya. Lezi izinhlelo zokusebenza ezimbalwa ze-Mac yakho
Sakaza imininingwane kumadokhumenti akho nge-Black Out, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Ukungeza umugqa omnyama ezingxenyeni zemibhalo ongafuni ukukhombisa inqubo elula kakhulu ngeBlack Out, isicelo samahhala isikhathi esilinganiselwe.
Dala noma yiluphi uhlobo lokwakheka nge-Photo Collage Maker
Umenzi we-Photo Collage usinikeza inani elikhulu lamathuluzi wokwenza izingoma ezimnandi ngezithombe esizithandayo.
Dala izithonjana zakho nge-Icon Plus, etholakalela ama-euro ama-1 isikhathi esilinganiselwe
Ukwakha izithonjana zethu, kungaba ngezinhlelo zokusebenza esizifakile noma zezinhlelo ze-iOS, inqubo elula nge-Icon Plus.
Ngaphezulu kwezifanekiso ezingama-500 zazo zonke izinhlobo ngama-euro angu-2,29 kuphela
Uma ufuna iphakethe lesifanekiso le-iWork elihlangabezana nezidingo zakho ezijwayelekile noma ngezikhathi ezithile, kufanele ubheke lolu hlelo lokusebenza.
Namathisela i-Mac isasebenza jikelele futhi manje iyabhaliswa
Olunye uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuphatha ibhodi yokunameka ku-Mac uku Namathisela. Manje lokhu sekuhanjiswe kumodeli yokubhaliselwe.
Sakaza usuka ku-Mac yakho uye kunoma yisiphi isikrini nge-JustStream Pro
I-JustStream Pro ikuvumela ukuthi usakaze kusuka kwi-Mac yakho uye kunoma iyiphi idivayisi, kungaba yi-smart TV, i-Apple TV, noma i-Roku device
IGoogle Stadia manje ingasakaza imidlalo iye kwi-Mac yakho nge-4K
IGoogle Stadia manje ingasakaza imidlalo iye kwi-Mac yakho nge-4K. Uma unokuxhumeka okuhle kwe-inthanethi, ungadlala kuGoogle Stadia ngo-4K.
I-Facebook Messenger ye-Mac iqala ukuphuma eYurophu
I-Facebook Messenger ye-Mac iqala ukuphuma eYurophu. Isivele isebenza eFrance, futhi maduzane izosebenza emhlabeni jikelele.
I-Noise Meter Pro ye-Mac, manje imahhala
Utholakale ku-Mac App Store Noise Meter Pro mahhala, Sebenzisa iMac yakho kube sengathi iyi-Apple Watch bese ulinganisa umsindo endaweni okuyo.
Guqula amafayela we-MKV abe yi-MP4 nge-MKV2IOS
Ukuguqula amafayela ngefomethi ye-MKV kuya ku-MP4 inqubo elula kakhulu futhi esheshayo ngenxa yohlelo lwe-MKV2IOS.
IMajong Classic 2 Pro, mahhala isikhathi esilinganiselwe
I-Chinese Solitaire Majog itholakala mahhala isikhathi esilinganiselwe ku-Mac App Store
Ukwehla kwe-FPS ku-Fortnite kuyiphutha leMidlalo yama-Epic futhi izokulungisa
Ukwehla kwe-FPS ku-Fortnite kuyiphutha leMidlalo yama-Epic futhi bazokulungisa. Zenziwa esahlukweni 2 sesizini yesibili, futhi zizolungiswa.
Dala ibhuku lakho kusuka ku-Mac yakho nge-BookWright
I-BookWright ikuvumela ukuthi wakhe ibhuku lakho kwi-Mac yakho, uyihlele bese uyithengisa. Konke kusuka kukhompyutha yakho nangendlela elula
Umdlalo we-InnerSpace, mahhala isikhathi esilinganiselwe ku-Epic Games Store
Umdlalo wamahhala i-Epic Games Store engenzi ukuthi sitholakale kuwo kuleli sonto yi-InnerSpace
Umshicileli we-Affinity we-Mac uvuselelwa ngokungenisa kwe-IDML, ukukhanya kwangaphambili, izifanekiso, nokuningi.
Umshicileli we-Affinity we-Mac uvuselelwa ngokungenisa kwe-IDML, ukukhanya kwangaphambili, izifanekiso, nokuningi. I-suite yonke ye-Affinity ithole isibuyekezo esisha se-1.8 namuhla ngezithuthukisi ezithile ezibalulekile.
Uhlobo lweTelegram labasebenzi nabaphathi beqembu, luthola isibuyekezo esisha esengeza ukusekelwa kwevidiyo entantayo yewindi.
Guqula amafayela ngefomethi ye-VSD / VSDX iye kunoma iyiphi enye ifomethi
Ukuvula, ukuguqula noma ukuphrinta amafayela ngefomethi ye-VSD ne-VSDX inqubo elula kakhulu ngenxa yohlelo lweVSD Viewer & VSD Converter
I-Telegram ivuselelwa kunguqulo 5.9.2
Uhlobo olusha lweTelegram manje seluyatholakala lapho amaphutha athile atholwe kwinguqulo yangaphambilini alungiswa khona.
ISafari izokwenqaba izitifiketi ze-HTTPS ezinezinyanga ezingaphezu kwezingu-13 zisebenza
Phatha i-akhawunti yakho ye-Instagram kusuka ku-Mac yakho ngamaGridi
AmaGridi e-Instagram, asivumela ukuthi siphathe i-akhawunti yethu ye-Instagram ngqo kusuka kwi-Mac yethu ngaphandle kokusebenzisa inguqulo yewebhu.
Humusha noma yiliphi ikhasi lewebhu olivakashelayo nge-Translate for Safari
Uma ufuna isandiso seSafari esikuvumela ukuthi uhumushele umbhalo kwezinye izilimi zamawebhusayithi owavakashelayo, i-Translate ye-Safari kungenzeka ihlangabezane nezidingo zakho.
I-Appstat, uhlelo lokusebenza olusha lwe-MacOS lonjiniyela be-Apple
I-Appstat, uhlelo lokusebenza olusha lwe-MacOS lonjiniyela be-Apple. Ikwazisa ngemininingwane ye-App Store Connect kubha yemenyu ye-MacOS.
IGeforce Manje iletha iCyberpunk 2077 kuma-Macs ngosuku lokukhululwa
IGeforce Manje izoletha iCyberpunk 2077 kumaMacs ngosuku lokukhishwa kwayo. NgoSepthemba 17 izokhishelwa abaduduzi, i-PC, neGeForce Manje.
Qala ukuthatha izinyathelo zakho zokuqala ekwakhiweni kwemifanekiso ngalezi zinhlelo zokusebenza
Uyakuthanda ukwakheka kwezithombe? Ungaphuthelwa yilezi zinhlelo zokusebenza zokuklama nokuhlela usebenzisa iMac. Yikuphi okukhethayo?
Khipha umsindo kumavidiyo akho ngalolu hlelo lokusebenza lwamahhala
Uma ufuna ukukhipha umsindo kuvidiyo, singakwenza ngokushesha futhi kalula ngenxa yohlelo lweVideo2Audio olutholakala ku-Mac App Store.
I-Safari Technology Preview 101 ilungisa izimbungulu zangaphambilini.
I-Apple isanda kukhipha inguqulo engu-101 ye-Safari Technology Preview, ukulungisa izimbungulu nokwenza ngcono inguqulo yangaphambilini.
I-Alto´s Odyssey ekugcineni itholakalela iMac
I-Alto´s Odyssey ekugcineni itholakalela iMac. Uma udinga ukuphumula kancane, lo ngumdlalo wakho. Manje futhi nge-macOS.
I-Adobe Photoshop igubha iminyaka engama-30 inezici ezintsha ze-Mac ne-iPad
I-Adobe Photoshop igubha iminyaka engama-30 inezici ezintsha ze-Mac ne-iPad. Uma ungumbhalisi we-Creative Cloud, zizovela kudeskithophu yakho ye-Mac ne-iPad.
Uhlelo lokusebenza oludumile lwe-Streaks manje seluyatholakala nge-Mac
Uhlelo lokusebenza oludumile lwe-Streaks olushukumisayo manje seluyatholakala ukulanda i-macOS futhi lusalungile.
Vuselela ngezici eziningana ezintsha ze-AirMail 4
Uhlelo lokusebenza lwe-AirMail lubuyekezwa ngezindaba eziningana ezithakazelisayo kubasebenzisi abanenguqulo ye-Pro yale klayenti lemeyili
I-Aztez, i-beat'em ejabulisayo mahhala isikhathi esilinganiselwe
Kuze kube ngoFebruwari 20 ozayo, i-Epic Games Store isivumela ukuthi silande umdlalo we-Azpez mahhala, umdlalo oxuba amasu nokulwa ngezandla.
I-Fortnite ku-Mac: Izidingo Zesistimu Namathiphu Wokusebenza
I-Fortnite ku-Mac: Izidingo Zesistimu Namathiphu Wokusebenza. Uma isifakiwe iyahlukahluka kumasethingi angaphakathi womdlalo ukuthola ukushelela.
Ukunikezwa okuthakazelisayo kuvela kumdlalo iTomb Raider oshiya intengo yawo uhhafu walokho okufanele ngempela
Faka ikhalenda kubha yemenyu bese uxhumana nayo nge-InstaCal
Uma ufuna uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ufinyelele futhi uguqule ikhalenda lakho kusuka kubha yemenyu, i-InstaCal kungenzeka yilona uhlelo owufunayo.
I-Lockdown iyatholakala ukwenza iMac yakho ivikeleke kakhulu
I-Lockdown isivele iyiqiniso kuma-macOS. Kuhlala kukuhle njalo ukuthi okungenani ube ne-firewall eyodwa futhi lolu hlelo lusebenza kahle kakhulu.
I-Spark ikhipha isibuyekezo esisha se-macOS
Uhlelo lokusebenza lweSpark lokuphatha ama-imeyili lusanda kuvuselelwa i-Mac, lufaka izici ezintsha nezithakazelisayo
IBlueMail ibuyela kuMac App Store njengoba impi ne-Apple iqhubeka
Ngemuva kwezinyanga eziyi-8, uhlelo lweBlueMail lubuyela ku-macOS, noma onjiniyela balo bengalubeki eceleni icala labo ngokumelene ne-Apple.
I-Apple yethula iSwift Playgrounds ye-Mac: funda ukufaka ikhodi ngokudlala
I-Apple yethula iSwift Playgrounds ye-Mac: funda ukufaka ikhodi ngokudlala. Uhlelo lokusebenza lwamahhala oluvela ku-Apple lokufunda ukufaka ikhodi iSwift.
I-Spike imeyili ingeza imodi emnyama nokuningi kusibuyekezo sayo esisha se-macOS
I-Spike mail ivuselelwa i-MacOS eletha imodi emnyama ehlakaniphile lapho ikwazi khona ukuguqula ngokuzenzakalela izincwadi zezindaba ze-HTML
Imenenja yefayela iMaCommander 2, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Uma ufuna imenenja yefayela efana naleyo enikezwa yiWindows, kepha kwi-macOS, iMaCommander kuyindlela enhle ongayicabangela.
U-Edison Mail uphinde athengise imininingwane ngabasebenzisi bayo kubantu besithathu.
U-Edison Mail uphinde athengise imininingwane ngabasebenzisi bayo kubantu besithathu. Uthi yindlela isicelo sakhe emahhala ngaphandle kokukhangisa okucasulayo komsebenzisi, nokuthi imininingwane ephethwe ayaziwa ngokuphelele.
Khombisa izithombe zakho ozithandayo sengathi bekuyisethulo ngalolu hlelo lokusebenza
Uma ufuna ukugwema ukudala izethulo zezithombe zakho ozithandayo, ungasebenzisa lolu hlelo lokusebenza olusivumela nokuthi sengeze umculo wangemuva bese usetha isikhathi ngesithombe ngasinye
I-Calinsight, ikhalenda yebha yemenyu
Uma ufuna uhlelo lokusebenza lokuphatha ikhalenda yakho kusuka kubha yemenyu, ungahle uthande ukubheka i-Calinsight.
Imidlalo yamaWindows manje kwi-Mac yakho ngenxa yeGeForce Now
Sula i-Mac yakho endala ngoba ngenxa yeGeForce Now uzokwazi ukudlala imidlalo yevidiyo yesimanje ekuqaleni ehloselwe iWindows kuphela
Ideskithophu yeWhatsApp ngezinguqulo ngaphambi kuka-0.4.316. inamaphutha amakhulu okuphepha
Kutholakale ukuba sengozini kuhlelo lokusebenza lwe-WhatsApp lwe-Mac. Hlola futhi ubuyekezele enguqulweni yakamuva yi-akhawunti ekulethela yona.
I-SiteSucker isivumela ukuthi silande noma yiliphi ikhasi lewebhu nakho konke okuqukethwe kwalo
Uma ufuna ukulanda noma yiliphi ikhasi lewebhu kanye nakho konke okuqukethwe kwalo, ikhambi elinikezwa yiSayithiSucker lingenye yezinto ezihamba phambili ezikhona njengamanje kwi-Mac App Store.
I-Twitter isanda kukhipha isibuyekezo esisha se-macOS lapho uhlelo lokusebenza luhambisana kakhulu neTouch Bar.
Guqula noma iyiphi ifomethi yomsindo ibe yi-MP3 ngalolu hlelo lokusebenza
Uma kukhulunywa ngokuguqula amafayela alalelwayo abe yi-MP3, sinenani elikhulu lezicelo ...
Ku-Optics, ukuqonda kwengqondo nokukhohlisa okubonakalayo kusifaka esivivinyweni
Uma ufuna umdlalo wemibono ebonakalayo ehlola ukuqonda kwethu kwengqondo, kungenzeka ukuthi u-Optica azenelise izidingo zakho.
URuya, umdlalo wephazili ozokumangaza
URuya akuyona nje umdlalo wephazili ohlukile, njengoba futhi usimema ukuba siphumule futhi sizindle sibonga ingoma yaso emnandi.
Faka izinqamuleli ku-Mac yakho ngeXMenu
I-XMenu uhlelo olulula lwe-Mac oluzokuvumela ukuthi ungeze uchungechunge lwamamenyu wesinqamuleli oluzosiza kakhulu
I-Robot Fighting 2 Minibots, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Thola umdlalo weRobot Fighting 2 ngokuphelele mahhala isikhathi esilinganiselwe se-Mac yakho. Impi yamarobhothi iza kwi-Mac yakho
Izikhangiso ezintsha ze-Apple Arcade ku-Youtube
U-Apple uthumele amavidiyo amasha ambalwa ukukhuthaza insiza ye-Apple Arcade. Izikhangiso ezimnandi ezigcwele imininingwane ye-Apple
I-Malware isebenza kuma-Macs ngenxa yeFlash Player
I-Malware isebenza kuma-Macs ngenxa yeFlash Player. I-Flash Player ifile. Uma usayifakile ku-Mac yakho, yikhiphe ngokushesha.
I-Fantastical 3.0: Imahhala futhi inemodi yokubhalisa
Uhlelo lokusebenza lwekhalenda oluhle luthola esinye sezibuyekezo ezinkulu emlandweni waso futhi luguqula imodeli yebhizinisi lalo ekubhaliseni
Faka ama-watermark ezithombeni zakho nge-Watermark Sense
Ukungeza ama-watermark ezithombeni zethu akukaze kube lula ukwedlula ngohlelo lokusebenza lweWatermark Sense
IButter Royale neNo Way Home iyatholakala ku-Apple Arcade
Kufakwe imidlalo emibili emisha ku-Apple Arcade. IButter Royale neNo Way Home zivutha izihloko zalesi sigaba se-Apple ukuze uzijabulise
Umdlalo weRocket Rock ukuyeka ukusekela iMacOS
Umthuthukisi weRocket Rock umemezele ukuthi uzowususa umdlalo ngoMashi, aqede amandla okudlala online.
I-Telegram ivuselelwa iMac ngokuthuthuka ocwaningweni
Uhlobo olusha lweTelegram ye-Mac kulokhu eyi-5.9. Izinguquko nezindaba eziphathelene nocwaningo ziyangezwa
ICloud Creative Cloud ye-Adobe manje isekela ukungena ngemvume nge-Apple ID
I-Adobe Cloud Cloud isivele isekela ukungena ngemvume nge-ID yakho ye-Apple. Kepha qiniseka ukuthi i-Apple ngeke idlulise noma iyiphi idatha yomuntu siqu kusuka ku-akhawunti yakho.
Jabulela lonke isaga leHalf-Life mahhala kuze kube uMashi
I-Valve isivumela ukuthi sijabulele lonke isaga leHalf-Life mahhala kuze kube uMashi, inyanga lapho kuzokhishwa khona iHalf-Life: I-Alyx
I-Airplane Sky Voyage game mahhala isikhathi esilinganiselwe
Uma uthanda imidlalo yendiza manje isikhathi esilinganiselwe ungalanda umdlalo we-Airplane Sky Voyage we-Mac yakho. Isikhathi esilinganiselwe
IVideoProc, omunye wabahleli bevidiyo abangama-4K abahamba phambili
Uma ufuna umhleli olula wokuguqula amavidiyo wakho we-4K uwahlele kwamanye amafomethi, i-VideoProc wuhlelo olufunayo
Umbhali we-iA 5.4.2 ungeza ukusebenza okusha ku-Mac
Uhlobo olusha 5.4.2 lwe-IA Writer, umhleli ngokugqama, lengeza izici ezintsha ezithokozisayo ekuthumeleni nasekukopeleni izinketho ku-macOS
Isiphequluli seMicrosoft Edge Chromium silungele i-MacOS
Cishe izinyanga ezintathu ngemuva kokwethulwa kwe-beta, i-Edge Chromium iyatholakala ukuze ilandwe kuma-macOS kepha hhayi ngokugcwele.
Ungawasebenzisa kanjani ama-Sticky Notes ku-MacOS Catalina
Sikufundisa ithuluzi lomdabu le-MacOS Sticky Notes ukuze ukwazi ukubhala ngokushesha amanothi akho ngaphandle kwesidingo sezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle
I-Apple Reality Converter yenza kube lula ukudala izinto ezingokoqobo ze-3D
I-Apple Reality Converter yenza kube lula ukungenisa, ukuhlela, nokwenza izinto ze-3D ezihambisana nobuchwepheshe be-augmented reality.
I-Sundered, mahhala isikhathi esilinganiselwe ku-Epic Games Store
I-Sundered, ngumdlalo omusha esingawulanda mahhala we-macOS nge-Epic Games Store
Uhlobo olusha lweGhostery Lite seluyatholakala
IGosthery Lite ingeza uchungechunge lokuthuthuka enguqulweni yayo entsha engu-1.1.0 esanda kukhishwa. Lesi sivimbeli sesikhangiso sewebhu siyisandiso seSafari
Noma iyiphi i-PDF ku-Word Converter ye-Mac, enesaphulelo esingu-60%.
Uma udinga ukuguqula ama-PDF amaningi abe yi-Word noma amakhasi ku-Mac yakho, kufanele usebenzise ngokunenzuzo lokhu kunikezwa kulolu hlelo lokusebenza olwehlise intengo yalo ngama-60%